အခုချိန်ထိဘ၀လက်တွဲဖော်ကိုရှာလို့မတွေ့သေးတာ ဒါတွေကြောင့်ပါ | Buzzy
သင်ရော single ဖြစ်နေတာ ဒါတွေကြောင့်လား?
Relationship တွေကလည်းအားကျစရာကောင်းလောက်အောင်ချစ်ကြည်နူးနေကြတဲ့အချိန်မှာ တစ်ယောက်တည်းအထီးကျန်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။
တကယ်တော့ အဲ့ဒီလိုအထီးကျန်နေတယ်ဆိုတာလည်း သင့်မှာဒီအကြောင်းရင်းတွေရှိနေလို့ပါ။သူများတွေချစ်သူတွေတစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်ပြောင်းလဲနေချိန် သင့်မှာ ချစ်သူမရှိသေးဘူးဆိုတာ တကယ်တော့ ဒီအချက်တွေကြောင့်ပါ။
သူများအချစ်ရေးတွေသာယာသလို သင့်အချစ်ရေးက မသာယာမှာစိုးရိမ်နေတယ်။ကိုယ့်အလှည့်ကျမှ ဒါတွေဖြစ်လာမလား၊ဟိုဟာတွေဖြစ်မလားကြိုတွေးပူနေတယ်။အဲ့ဒီလိုတွေးပူနေလို့ကို ဇီဇာကြောင်တယ်ဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တပ်ခံရတော့တာပါပဲ
အရင်တစ်ယောက်နဲ့အခုတစ်ယောက် အကျင့်တွေ၊အချိုးတွေကအတူတူပဲ။ယောက်ျားတွေအားလုံးတစ်ပုံစံတည်းပဲဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကြီးကိုစွဲကိုင်ထားတယ်။အရင်တစ်ယောက်က နာကျင်အောင်လုပ်သလို ဒီတစ်ယောက်ကလည်း သင့်ကိုနာကျင်ခံစားရအောင်လုပ်မယ်လို့ထင်နေတယ်။သင့်ကိုချစ်တဲ့သူတွေရှိပါလျက်နဲ့ခပ်မြန်မြန်ပဲပုတ်ထုတ်လိုက်တာမျိုးလုပ်မိနေတယ်
အချိန်မဖြုန်းပါနဲ့။တစ်ခြားတစ်ယောက်ကိုကြိုက်နေတဲ့သူက သင့်ကိုကြိုက်လာဖို့ဆိုတာ အဝေးကြီးပါ။သူကြိုက်နေတဲ့တစ်ယောက်ထက်သင်ကပိုလှတယ်၊ပိုတော်တယ်ဆိုရင်တောင် အချစ်ဆိုတာ ရုပ်ရည်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူး။သူနဲ့အဲ့ဒီတစ်ယောက်အဆင်မပြေလို့လမ်းခွဲလိုက်ရင်တောင် သင့်ကိုချစ်လာမယ်ဆိုတာသေချာလို့လား?
ငါ့ချစ်သူက ရုပ်ချောမှ၊အကျင့်စာရိတ္တကလုံးဝပြည့်စုံနေမှ၊င့ါကိုလည်းအချိန်ပြည့်ဂရုစိုက်ပေးနေမှ စသဖြင့် င့ါရည်းစား၊င့ါချစ်သူက ဘယ်လိုဘာဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကြီးတွေးနေသရွေ့တော့ သင်တစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေဦးမှာပါ။တကယ်လို့ အဲ့ဒီလိုအရည်အချင်းအပြည့်နဲ့သူကိုလိုချင်ရင် ပထမဆုံးသင်ကိုယ်တိုင်မှာလည်းအဲ့ဒီလိုအရည်အချင်းတွေအားလုံးရှိအောင် ကြိုးစားးပါဦး။
ကိုယ်နဲ့ပြတ်သွားတဲ့ချစ်သူကိုသတိလည်းရနေတုန်း၊တစ်ခါတစ်လေကျတော့လည်း ကိုယ့်အပေါ်တကယ်ကောင်းပေးမယ့်ချစ်သူတစ်ယောက်လိုချင်တယ်ဖြစ်နေတုန်းဆိုရင် အချိန်ယူလိုက်ပါဦး။အရင်တစ်ယောက်ကိုသတိရနေတုန်းကာလမှာ တစ်ခြားတစ်ယောက်နဲ့ဇာတ်လမ်းကိုမစတာအကောင်းဆုံးပါ။ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ပြတ်သားအောင်အရင်လုပ်ပြီး သင်တကယ်လိုချင်တာဘာလဲဆိုတာ သိအောင်ကြိုးစားပါ။